पोखरामा करोड ठग्ने भीआइपी – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ असार १ गते शुक्रबार १८:२१ मा प्रकाशित
अग्लो कद । खाइलाग्दो शरीर ।शरीरमा बीइङ ह्यूमनको सर्ट । हातमा २० देखि ३० हजार पर्ने घडी ।नयाँ मोडलको आइफोन ।कालो चिल्लो ५० लाख पर्ने स्र्कापिओ गाडी । फेसबुक, इन्सट्राग्राम हेर्दा खानदानी ।
३–४ अरुको शरण लिएर करोड पर्ने घर भाडामा तर बाहिर भन्दा आफ्नै घर हो । नेता, गुण्डा, बिजनेस म्यान, लगायतका उच्च ओहदासँग अरु च्यानल लगाएर भेट्न अनि भेट्न पाएको छैन् फोटो खिच्ने गजबको योजना ।
आफ्नो परिचय दिँदा सबै क्षेत्रमा लगानी भएको व्यवसायी भन्ने । कतै जानु प¥यो भने १–२ जना भरौटे लिएर हिँड्छ ।
जसको काम हो, उसलाई गाडीमा एता उता छोड्ने, उसको सामान पु¥याइदिने र मान्छेको माझमा नोकर पालेछु जस्तो देखाउने तर उल्टो ति हिड्ने केटाहरुलाई खाना खाजा खाएको बिल तिर्न लगाउने ।
कुराको सिलसिला चल्दै जाँदा विभिन्न कन्सेप्ट, प्लानिङ्को कुराहरु सुनाउने ।सायदै त्यो देखे पछि कसले नपत्याउला १०–२० लाख सापटी।
ठगि गर्ने मास्टर माइन्ड शैली
मान्छेलाई आफ्नो सजिलै बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ यस्तो ठग्नेहरुको । कमजोर मान्छेलाई धक्काए हुन्छ, कि बलियोलाई फकाएर हुन्छ, आफ्नो जालमा पार्ने ।
कसैलाई इमोस्नल त कसैलाई ब्ल्याकमेल समेत गर्न पछि नपर्ने । विभिन्न रणनीति अपनाउने, घरपरिवार सँग घुलमिल हुने, नाता लगाउने र आत्मियता बढाउने ।
जो व्यक्तिलाई ठग्न छ, उसै सँग पैसाहात पारेपछिभएसम्म दिन रात सँगै लिएर हिँड्ने ।अलि–अलि खर्च गरे झैँ गर्ने र उसलाई सकेसम्म अरुसँग भेट्ननदिने ।
विभिन्न प्रलोभन देखाउँने, घुमाउँने, डुलाउँने, खुवाउँने, राम्रो होटेलमा राखेर होटेल को पैसा नि तिर्दिने गर्छन् । अझ सम्बन्ध गाढा बनाउँन केटी समेत मिलाइदिने गर्छन् ।
नयाँ व्यक्तिलाई ‘उ’ भन्ने गर्छ
– पैसा फ्रीज गर्नु हँुदैन, लगानी गर्नु पर्छ ।
– मेरो आफन्त नेता हो, उसको सम्पूर्ण कारोबार सम्हाल्ने म नै हुँ ।
– नयाँ बिजनेस प्लानिङ सुरु गर्न लागेको लगानी गर्न अलिकति पैसा पुगेन । नभए, मेरो गाडीमा लगानी हाल्नुस न त, जस्ता प्रलोभन।
– ‘मेरो’ नभन्नुस, असभ्य भयो, ‘हाम्रो भन्नुस् हाम्रो’जस्ता शब्द प्रयोग गरेर आत्मीयता बढाउने ।
– ‘म जस्तो इमानदार मान्छे जहिले ऋणमा हुन्छ’।
– फेसबुकमा नचाहिने व्यक्तिहरु एड गर्न हुँदैन, फाल्नुस्।
त्यसको अर्थ के हो भने, उसको पहिलाको कर्तुत थाहा नहोस् भनेर पहिल्यै त्यो व्यक्तिहरु फेसबुकबाट फाल्न लगाउँछ ।
उसको सिमित जक्सन र ठाउँहुन्छ, मान्छे भेट्नको लागि ।उद्देश्य, पहिला फसाएको मान्छेको सेरोफेरोमा नपुगोस भन्ने ध्येय हुन्छ ।
मास्टर माइन्ड शैली
– अरुको अफिस र कम्पनिको कार्यक्रममा घुस्रेर फोटो खिचाउने र त्यही फोटो फेसबुकमा हालेर मेरो आफ्नै अफिस हो, मेरो पनि लगानी छ,त्यहाँ भन्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने ।
या कुनै ठाउँ मा एमडी हुँ पनि भन्न पछि पर्दैनन् । अनि त्यो अफिस को गाडी, प्रोपर्टी मेरै हो पनि भन्छ ।सँगै फोटो राखेर अर्को विजनेस आफ्नो भन्न माहिर हुन्छन ।
– अरुको कम्पनि को स्टिगर गाडीमा टाँसेर अरुको कम्पनि पनि आफ्नै हो जस्तो देखाउने ।
– कोही राम्रो आचरण को व्यक्ति भेट्यो भने भन्छ – ‘म पनि हजुर जस्तै हो, आफू जस्तै मान्छे भेटे मैले, अरुलाई सेवा गर्दा गर्दा आफू नै लोन मा डुबे’ भन्ने ।
– कहिले त अर्काको गाडी लगेर १–२ माहिना सम्म चलाउने र बैना गरेर पैसा खाइदिने ।
– केटीहरु फेरेर हिंड्ने, जुन केटीको घरबाट पैसा झिक्न सकिन्छ, उ सँग बिहे गरेको नाटक गर्दै पैसा पाए पछि विभिन्न बहाना बनाएर सम्बन्ध टुटाउने ।
– जब पैसा पाएपछि सम्पर्क नै नआउने, उल्टो त्यहीँ व्यक्तिलाई नराम्रो भन्दै हिँड्ने ।
ठग राजा र उसकोगिरोह
उसले ठगेको पैसा परिचालन गर्न उसका सहकर्मीहरु लागि परेका हुन्छन्, सानो वा ठूलो लगानी गरेर । ५ लाख ठगे ५ लाखको लगानी र करोड ठगे करोडको लगानीसुरु गरि हाल्छन् ।
सम्पूर्ण ठगेको पैसाको परिचालन उसको सहकर्मीले गर्छ। सहकर्मीको पनि पहिलाको इतिहास हेर्दा ड्राइभर, मजदुरको हैसियत भन्दा माथि हुँदैन तर ठगेको पैसा खर्च गरेर सोसल मिडियामा अलि राम्रो रेष्टुरेण्टमा खाएको फोटोहरु दिन को ४–५ पटकपोष्टेको पोष्ट्यै हुन्छ ।कारण, भिआइपी जस्तै देखिने अभिष्ट जो उसको छ ।
उसले ठग्ने रसहकर्मीले पैसाको व्यवस्थापन गर्ने । जब पैसा लिइसकेपछि आफू आफू झगडा गरे जस्तो गर्ने ढोल पिटेर एकले अर्कोलाई दोष दिएर पैसा उम्काउने दाउमा हुन्छन्।
ठगेको पैसा एकजनाले ठग्ने र अर्कोले लगानी गर्ने अनि दुई जना नबोले जस्तो गर्ने ।
अझ बिचित्र कुरा त के छ भने, पैसा न आउँदै सम्बन्ध बिग्रियो भनेर दुई जना नमिलेको जस्तो गरेर उसको सहकर्मीले पैसा भएको व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्ने ।
फेरी नयाँ मुर्गा फेला परे सँगै भेट्न जाने अनि फेरी त्यहीँ चक्र चलिरहन्छ ।
कस्तोलाई फसाउँछन् ?
आँटको कुरा गर्यो भने मुसा देखेर डराउँछन् । तर बोलेर तर्साउन खोज्छन् ।
धम्काउने शैली कस्तो हुन्छ भने बोलीमा मात्रै यसलाई जमानामा हानेको, उसलाई लखेटेको, म पहिला जस्तो भएको भए नागैं परेर लखेट्थे, फलानोलाई आजकल राम्रो काम गरेर बिजनेस म्यान भएर हो जस्ता कुरा गर्छ । त्यो शब्दले जो डरायो त्यो उसको शिकार ।
जो उसका कुरामा सहजै मौरीको चाका पाएको अनूभुत गर्छ, ऊ फस्छ ।
‘कसले के गर्न सक्छ ? हामीलाई !
अन सक्सेस प्लानमा
जहाँ फसाउने प्लान सक्सेस हुँदैन् त्यहाँको बारेमा ‘लगानी हाल्देको तर छोडें मैले’भन्ने । कसैलाई पैसा चोर्यो मेरो र आजकल म सँग बोल्दैन भन्ने ।
अझ गाडीको कारोबारको क्रममा फसाउन नसकेर बलियो मान्छे पर्यो भने – मैले भ्याली बाहिरबाट खेल खत्तम गर्ने मान्छे बोलाको छु । अब खेल खत्तम गर्दिने हो भन्दै हिँड्ने ।
अनि कसैलाई –त्यसलाई त्यसकै टोल मा नांगै परेर दौडाउँछु भन्ने ।
ना रहेगा बाँस, ना बजेगा बाँसुरी
– जसको पैसा खाएको हो । त्यो व्यक्ति समाजमा आउँछ र हल्ला गर्छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा खाएको मान्छेको सम्बन्ध झुटा कुरा गरेर टुटाइदिन खोज्ने ।
– जसको पैसा खाएको हो,उसैले मलाई डुबायो, मैले लाइफ र करिअर बनाइदिन खोजेको उल्टै मलाई डुबायो भन्दै हिँड्ने ।
– जब पैसा माग्न मान्छे आउँछ उसलाई ‘गाडीले हान्दिन्छु’, धुलो हानेर फसाइदिन्छु भनेर धम्कि दिने त कसैलाई हतियार देखाएर तर्साउन खोज्ने ।
– कसैलाई नेता अनि डन, प्रशासनको धाक दिने ।
– अचम्मको कुरा के हो भने, उल्टै इज्जतको कुरा गर्ने । अर्काको सम्पत्ति खाईदिएर उल्टै मलाई फसायो, म डुबे भन्ने ।
लिगल इस्यू हुन्छ भनेर गाडी समेत आफ्नो नाममा राख्दैन । सकेसम्म कारोबार नगदमा नै गर्छन्, जसले गर्दा पैसा दिने मानिसले प्रमाण जुटाउन सक्दैन । अनि ठगेको पैसाले गरेको बिजनेस अर्काको नाममा ।
अनि ‘मैले कसैको पैसा खाएको छैन् अहिले सम्म’ भन्ने उसको रातामकै भने जस्तो थेगो हो ।
मैले पैसा कहाँ खाएको छु र, खाएको भए म सँग यही मोबाइल बाहेक के छ र सम्पति को नाममा ? भनेर दुख दर्शाउने ।
भाडाको घर, त्यहि पनि ३ महिना भयो भाडा तिरेको छैन भनेर भन्ने । अनि बेचेर पैसा लिइसकेको गाडीहरु देखाएर मेरो पैसा त्यहाँ फसेछ पनि भन्ने ।
पैसा भए देखाउन त कता राखेछु भन्ने ।उनीहरुको नियत नै खाने हुन्छ । र पछि समस्या हुन्छ भन्ने ठानेर सुरुबाट नै चलाखी अपनाउँछ ।
अझ भन्छन्‘सँगै हिँड्दैमा पैसा खाएको हुन्छ र, प्रमाण हुनुपर्यो नि ।’
जो दुखमा छ उही निसानामा
कसैको घर बैंकमा राख्न लगाउने त कसैको घर नै बेचेर खाइदिने । पीडितसँग न त कागज छ न त कुनै प्रमाण । त्यसैले प्रशासन सम्म जाने आँट पनि हुँदैन ।
अर्को कुरा उनीहरुको पैसा खाए पनि ठाउँ र सहर छोडेर जादैँनन् । नयाँ मान्छे फसाउँदै बसेका हुन्छन् ।
लगानी गर्न पनि सोच्नै पर्ने कुरा हो ।पत्ताउने नि उस्तै हो र दिने पनि उस्तै । फसेपछि डराएर कुरा लुकाउने नि उस्तै ।
यहीँ कारणले एक पछि अर्को फसाएर खुले आम हिँडेको हुन्छ गाडीका ब्राण्ड फेर्दै । ठोस प्रमाण नभएर कसैले कारबाही गर्नै सकेका छैनन् । फसिनेहरुले भएको घरबारी सबै फाले, ऊ भने सुकुम्बासीबाट वर्ष दिनमैे करोडपति भै’सक्छ ।
र यो समाज, ठग भए पनि गाडी चढ्नेकै कुरा विश्वास गर्छ । निभेको आगो कसरी ताप्नु र ?
कति बिचौलिया त कुरा मिलाइदिन्छु भनेर प्रशासनमा जान्छ कि भनेर हप्तादिन भन्दै भन्दै महिनौं वर्षौ कुराइदिने ।
अन्तिम स्थितिमा ३, ४ वर्षको चेक भए पनि पायौं भनेर मुख बन्द गर्न खोज्दिने । अझ् बाहिर कुरा नगर हैंभन्ने ।
उसका आफन्तहरु ५/१० लाख चलाउन पाइन्छ भनेर उसका गतिविधिहरुमा अप्रत्यक्ष तरिकाले सहयोग र संलग्नता जनाउने र मुर्गा परेपछि पूरा परिवार नै कसरी र कुन बहानाले पैसा उछिट्याउने ?भनेर प्लानिङ् अनुसार लुट्ने काम हुन्छ, कुनै पनि हिन्ट्स नछोडी ।
उसको मुख्य पेसा ठगि नै हो । पैसाको भूत यति सवार हुन्छ कि, बच्चा देखिको साथीहरुलाईधोका दिन्छ र जो सहयोग गर्न आउँछ उसैलाई फसाई दिन्छ ।
वास्तवमा न त उसको कुनै ओहोदा नै हुन्छ समाजमा, न त कुनै हैसियत नै । न त एजुकेसन, न त कुनै सिप, न कुनै कला ।ठग्ने कलामा व्यवसायीक भैसकेको हुन्छ ।
पैसाको लागि आफ्नो दिदी बहिनी,आफन्तको नाम बेच्न पनि पछि पर्दैन ।
यो लेख जनचेतना को लागि हो ।अरु न ठगिऊन। जो फस्यो उनीहरुसँग प्रमाण छैन् ।पीडित भएर पनि आधार नभएको कारण धम्कीले गर्दा ज्यानै जोगाएर हिँड्न पर्ने अवस्था…
– पाठक पत्र
जसपा सरकारमा जाने नजाने भन्ने टुंगो आज लाग्ने
होण्डाको नयाँ बाईक पोखरामा